Yiyiphi iMicroscope ye-Electron yona kwaye isebenza njani
I-electron microscopes yenza imifanekiso isebenzisa imithwalo yee-elektroni kunokuba i-light of light. UMonty Rakusen / Getty Izithombe
I-Microscope ye-Electron i-Microscope
Uhlobo oluqhelekileyo lwe-microscope onokuyifumana kwigumbi lokufundela okanye ityhubhu yesayensi yinyani yokukhanya. I-microscope ebonakalayo isebenzisa ukukhanya ukuphakamisa umfanekiso ukuya ku-2000x (ngokuqhelekileyo kuncinci) kwaye inokusombululo malunga nama-nanometers angama-200. Ngakolunye uhlangothi, i-microscope ye-electron, isebenzisa i- boram ye-electron kunokukhanya ukuze yenze umfanekiso. Ukuphakanyiswa kwe-microscope ye-electron ingaba phezulu njengama-10,000,000x, kunye nesisombululo sama-picometers ama-50 (0.05 nanometers ).
Iintlobo zokusebenzisa i-microscope ye-electron kwi-microscope ebonakalayo iphakamileyo kakhulu kunye nokuxazulula amandla. Iingxaki zibandakanya indleko kunye nobukhulu bezixhobo, imfuno yoqeqesho olukhethekileyo ukulungiselela iisampulu ze-microscopy kwaye isebenzise i-microscope, kunye nesidingo sokujonga iisampuli ekukhutsheni (nangona ezinye iisampuli zingasetyenziswa).
Indlela i-Microscope ye-Electron isebenza ngayo
Indlela elula yokuqonda indlela i-microscope eyenziwa ngayo i-electron microscope iyayithelekisa kumbane wesibane. Kwi-microscope ebonakalayo, ukhangelelwa ngamehlo kunye ne-lens ukubona umfanekiso ophakamileyo wesampuli. Ukusekwa kwe-microscope kuluhlu lweempawu, iilensi, umthombo wokukhanya, kunye nomfanekiso onokuwubona.
Kwi-microscope ye-electron, i-boram ye-electron ithatha indawo yokukhanya. I-specimen kufuneka ilungiselelwe ngokukhethekileyo ukuze i-electron ikwazi ukusebenzisana nayo. Umoya ngaphakathi kwecumbi leempempe uyaphunyulwa ukuze wenze umbane ngenxa yokuba iifowuni azihambi kude negesi. Esikhundleni seelensi, iikhoyili zombane zigxininisa intsimbi ye-electron. Ama-electromagneti aguqa i-electron ibhokhwe ngendlela efanayo ngendlela elula ngayo i-lens. Umfanekiso uveliswa ngama-electron, ngoko kubonwa ngokuba kuthatha isithombe (i-electron micrograph) okanye ngokujonga i-specimen ngokujonga.
Kukho iintlobo ezintathu eziphambili ze-electron microscopy, eyahlukileyo ngokweendlela umfanekiso owenziwe ngayo, indlela isampuli ekulungele ngayo, kunye nesisombululo somfanekiso. Ezi zi-microscopy ye-electron (TEM), ukuskena i-electron microscopy (SEM), kunye ne-scanning microscopy (STM).
I-Transmission Microscope ye-Electron (TEM)
Usosayensi omile kwi-laboratory yokuhlalutya nge-electron microscope kunye ne-spectrometer. Westend61 / Getty Izithombe
Iimpawu zokuqala ze-electron eziza kusekwa zazihambisa ii-electron microscopes. Kwi-TEM, intambo ye-electron ephakamileyo yamandla iyatluliswa ngokukodwa kwimizekelo enqabileyo ukuba yenze umfanekiso kwisitapu sefoto, inzwa, okanye isikrini se- fluorescent . Umfanekiso owenziwe unobumba obubili kunye nomnyama nomhlophe, uhlobo olufana ne-x ray. Ubuncedo bekhono kukuba luyakwazi ukuphakanyiswa kakhulu kunye nesisombululo (malunga nomyalelo wobungakanani obuhle kuneSEM). I-key disadvantage kukuba isebenza kakuhle ngeesampuli ezincinci kakhulu.
Ukukhangela iMicroscope ye-Electron (SEM)
Izazinzulu zisebenzisa iSknning Electron Microscope (SEM) ukujonga ipollen. UMonty Rakusen / Getty Izithombe
Xa uhlalutya i-electron microscopy, i-borrow of electrons ihlaziywa ngaphantsi komzekelo wesampula kwifayile ye-raster. Umfanekiso wenziwa ngama-electron aphezulu avela phezulu xa evuyiswe ngumgqomo we-electron. Umtshini wemephu iimpawu ze-electron, ukwakha umfanekiso obonisa ubunzulu beentsimi ngokubhekisele kwisakhiwo somhlaba. Nangona iinqununu zingaphantsi kwe-TEM, i-SEM inikezela ngeenzuzo ezimbini ezibalulekileyo. Okokuqala, yakha umfanekiso wesithathu womfanekiso wesampuli. Okwesibini, inokusetyenziswa kwiimodeli ezigqithisileyo, kuba kuphela ummandla uphethwe.
Kuzo zombini i-TEM kunye ne-SEM, kubalulekile ukuqaphela umfanekiso awukona ukubonakaliswa okuchanekileyo kwesampuli. I-specimen inokufumana utshintsho ngenxa yokulungiselela kwayo i-microscope, ukususela kwi-exposure to vacuum, okanye ukusuka kwi-exposed column.
Ukukhangela iMetroscope (Tunneling Microscope)
Ukukhangela imibala ehamba nge-microscope (STM) umfanekiso womgangatho wesitoreji esisebenzisa i-atom enye ukumela idatha. I-FRANZ HIMPSEL / UNIVERSITY WISCONSIN / ISAYENSI IFOTO YEBHAYIBHILE / Getty Izithombe
I-microscope (STM) yokubhanqa imifanekiso kwi-atomic level. Nguye kuphela uhlobo lwe-electron microscopy engakwazi ukufanekisa i- athomu nganye . Isisombululo sazo malunga ne-0.1 nanometers, eneenkcukacha ezinzulu malunga nama-nanometer angama-0.01. I-STM ingasetyenziselwa kuphela ukungcola, kodwa kwakhona emoyeni, amanzi, kunye nezinye iigesi kunye neelwelo. Ingasetyenziselwa ububanzi beqondo lokushushu, ukusuka kwi-zero epheleleyo ukuya kuma-1000 ° C.
I-STM isekelwe kwi-quantum tunneling. Isicatshulwa sokuqhuba umbane senziwa kufuphi nommandla wesampuli. Xa kusetshenziswe umbane wamandla, iifowuni ziyakwazi ukukhonkxa phakathi kwesikhokelo kunye neempimpe. Utshintsho olwangoku lwalowo mgangatho lulinganiswa njengoko lucatshulwa kulo lonke isampuli ukwenza umzobo. Ngokungafani nezinye iintlobo ze-electron microscopy, isixhobo sithengeka kwaye senziwe lula. Nangona kunjalo, i-STM idinga iisampula ezicocekileyo kakhulu kwaye kunokuyinyanzela ukuyifumana ukusebenza.
Ukuphuculwa kwe-microscope yokudonsa i-scanning yathola uGerd Binnig noHeinrich Rohrer ngo-1986 iNew Prize kwiFizikiki.
I-Khemistry esebenzayo Iingxaki: UMthetho weGesi ofanelekileyo
Ngaba Amanzi iCompound okanye i-Element?
Ngaba ii-Icebergs zenziwe ngamanzi amnandi okanye ngamanzi eTyuwa?
10 Iinkonzo zemihla ngemihla
Iingoma ezidumeleyo zeNkcubeko zabantwana
Amagical Magic Ama-apula
Kuthetha ukuthini inxaxheba?
Biography kaCharles Dickens
Indlela yokuthi 'kuya' ngesiJamani - 'Nach' ngokubhekiselele ku 'Zu'